Kuyini ukuvakasha kokuzingela? | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Amathiphu, Izindawo zokuvakasha
Uyazi ukuthi yini ezokuvakasha zokuzingela? Kuyinto enzima ukucacisa egameni kodwa uma ngikhuluma ngezilwane nangamadoda… uyawuthola umqondo?
Ukuzingela ezokuvakasha ukuzingela ezokuvakasha. Mhlawumbe akusiyona ethandwa kakhulu namuhla noma ene-press ehamba phambili, empeleni ukufa akumnandi, kepha iqiniso ukuthi likhona futhi kunezingxenye eziningi zomhlaba ezinikela ngazo futhi zihlala kuwo.
1 Ukuzingela ezokuvakasha
2 Lapho kwenziwa khona ezokuvakasha zokuzingela
3 Ukuzingela ezokuvakasha eSpain
Leli igama lezokuvakasha eligxile ekuzingeleni futhi elihambisa izinkulungwane zabantu, abaningi babo abacebile, emhlabeni wonke. Kusemthethweni futhi labo abakwenzayo kufanele bahambisane nemithetho kanye nezinkambiso ezikucabangayo.
Vele, kuhlala kukhona labo abaphula umthetho futhi babulale izilwane ezingezinhlobo ezivikelekile noma abazenza ngaphandle kwenkathi, kepha lokho sekuvele kuyicala. Lapho ezokuvakasha zenziwa ngokusemthethweni ngisho Kuyasiza ukongiwa kwezinhlobo nokusinda kwemiphakathi kulezo zindawo.
Ukuzingela ezokuvakasha kugcwele umhlaba wonke ngakho sayithola isuka e-United States, yadlula eNingizimu Melika naseSpain yaya eCroatia. Mhlawumbe une-safaris e-Afrika ngaphezulu engqondweni kepha uzobona ukuthi ukuzingelwa kwezemidlalo, ngemuva kwakho konke lokho, kwenzeka yonke indawo.
Kukhona ingqalasizinda yokuzingela yangempela lokho kunakekela ukuphathwa kwezinto, izimvume nokuthi konke kusezinhlakeni zokusimama hhayi engozini. Ochwepheshe bathi ukuzingela kuhambisana nesimo sethu nokuthi kunobuhle nobuchule obuthile bokukuyeka esifubeni somlando kungekudala.
I-World Tourism Organisation ibheka ukuvakasha kokuzingela ngaphakathi kwezokuvakasha kwezemidlalo futhi kugcizelela ukusimama kwemvelo ngoba, njengakwezinye izinhlobo zezokuvakasha, umuntu uxhumana ngqo nemvelo.
Akukhona ukuhamba nokuthenga izikhumbuzo ngakho-ke akubona bonke abantu abanemali okushiwo lo mdlalo. Ikakhulukazi uma umdlalo wakho ungowokuzingela umdlalo omkhulu futhi kufanele uye e-Afrika… Kepha ngezinga elincane noma ezingeni elincane kungumdlalo ongasetshenziswa nasezifundazweni, ezindaweni zasemakhaya noma emazweni aqhelelene kakhulu emhlabeni.
Lapha okubalulekile ubukhona boMbuso uma kukhulunywa ngemithetho ngoba siyazi ukuthi uma engalamuli, okwenzekile ngaphambili kuzokwenzeka: ukunyamalala ngokuphelele kwezinhlobo. Ngokulawulwa kwezemidlalo okulawulwayo umphumela uhlukile futhi ulingana evame ukusetshenziselwa ukulawula inani labantu bezinhlobo ezithile ukuthi uma kudlula inombolo ethile bazohlasela abanye.
Ukuba khona koMbuso kusobala ukuthi kusuka izimvume, of ukulungisa izinkathi zokuzingela, kokugunyazwa nokulawulwa kwezinkampani ezinikeza le nsizakalo yezokuvakasha yokuzingela.
Ngokuyisisekelo ezokuvakasha zokuzingela zihlukaniswe umdlalo omncane, umdlalo omkhulu nomdlalo wamanzi. Amabili okuqala abhekisa kubukhulu bamadamu bese kuthi okwesibili abhekiswe endaweni lapho aqhutshwa khona. Umdlalo omncane ufaka unogwaja, ijuba lofudu noma intendele, isibonelo. Umdlalo omkhulu ufaka izingulube zasendle, izinyamazane, kanye nokuzingela emanzini i-webbed ne-wader birdfowl.
Ngakolunye uhlangothi sinakho imakethe ebekelwe ikakhulukazi izivakashi ngemali eningi, bafuna indawo yokuhlala nezinsizakalo, enye yabazingeli bezemidlalo abakhethekile kanye nowesithathu semi-okungakahleleki.
Abazingeli bezemidlalo abakhethekile bavame ukuhamba ngamaqembu akhethiwe ahambela izindawo ezithile efuna izinhlobo zezinhlobo ezithile. Iqembu lokugcina alinayo imali eningi noma isidingo esiningi futhi kaningi abaqashi ngisho neqembu lezokuvakasha futhi bazihambele bodwa.
Lapho kwenziwa khona ezokuvakasha zokuzingela
E-Afrika, kunjalo. Leli zwekazi elikhulu nelicebile liyindawo yokuqala efika engqondweni nangesizathu esihle. Kunamazwe ase-Afrika anezinqolobane zezilwane futhi ngokwawo ahlela ama-safaris okungenzeka ukuthi azingela noma angahle, abiza kakhulu futhi akhethekile, ashibhile futhi alula. Kwesinye isikhathi bayazingela kanti kwesinye isikhathi kumane kubuka ukuvakasha kwezinyoni.
Ngikhuluma ngani Tanzania, Cameroon, Namibia. Ngikhuluma ngamabhubesi, izindlovu, izinsephe, izinyathi, izingwenya, inyamazane. Kwesinye isikhathi kuhilela ukuzijwayeza lo mdlalo futhi kwesinye isikhathi ukuwufunda ngeziqondiso ezikhethekile. Izimvume kufanele zicutshungulwe bese zinamathela enanini elingazingelwa noma izinsuku ezibekelwe ukuzingela uqobo.
Ukushiya i-Afrika Argentina ENingizimu Melika, sekuyindawo yokuvakasha yokuzingela isikhashana manje. AmaPampas kanye nePatagonia eseningizimu banikela ngezabo izingulube zasendle, izinyathi, amajuba, amadada, izimbuzi, ama-puma noma izinhlwathi. Okuningi enyakatho I-México inikeza ukuzingelwa kwe-jaguar futhi uma siqhubeka nokukhuphuka yibo ECanada nase-United States.
Amabhere, izinyamazane ezinkulu, izimpisi nezinyathi zaseMelika yizintandokazi eNyakatho Melika nakwezinye izindawo Alaska ibhere elisendaweni emhlophe nezimpawu ezincane kuyazingelwa. Eqinisweni, iCanada igunyaza ukuzingelwa kwamazinyane ezinzulube ezingaphezu kuka-XNUMX XNUMX ngaphandle kwezinwele.
Esifundeni sase-Asia Pacific isimo esihle se- ENew Zealand nase-Australia Iphinde yaba yindawo yokuvakasha yokuzingela futhi abazingeli bamasha lapho befuna izingulule noma izinyamazane zendawo.
Ukuzingela ezokuvakasha eSpain
Ukuzingela kunomlando omningi ngoba imininingwane yesimo sezulu sayo kanye nejografi yakha imvelo eyahlukene, ngayinye inezinhlobo zayo. Inamandla ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya, izindawo ezinabantu abambalwa ngenxa yokufudukela emadolobheni.
Ezinye izindawo ziphendukele kufayela le- ukuzingela izivakashi okusimeme futhi imiphumela ibe mihle njengoba izinhlobo zezilwane zivuselelwe ukuthi ukuzingela ngokungakhethi kwamakhulu eminyaka adlule kwacishe kwazenza zanyamalala. Yini enye kuwumthombo wemali engenayo, ikhiqiza imisebenzi eqondile engaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu futhi ihambisa cishe ama-euro ayizigidi ezingama-240, kuphela eCastilla-La Mancha, isibonelo.
Kunezinhlobo ezahlukene zokuzingela kwezemidlalo: ama-filats, i-parany nenja ne-ferret, i-counter, i-silvestrismo, yeqa, ngomnsalo, nxazonke, inkomo nomkhonto Ngamunye wembula indlela ehlukile yokuzingela nokubamba inyamazane (izingibe ezihlahleni, amanetha noma izilwane ezifana nezinja, ama-ferrets noma izinyoni eziqeqeshelwe leyo njongo, izibhamu, izithombo).
Ngamafuphi, yilokho okushiwo ezokuvakasha zokuzingela: isisulu, umzingeli, uhambo, indawo yokuhlala, i-adrenaline emithanjeni nendebe. Noma ngabe ulele etendeni elilula ngaphandle kwendlu yokugezela, endlini yezwe ebukekayo, ehhotela, efeni noma enkanjini kanokusho ngaphansi kwezinkanyezi zase-Afrika, umoya wasendulo wokuzingela yiwona ohlanganisa lezi zivakashi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amathiphu » Kuyini ukuvakasha kokuzingela?
Ukuzingela ezokuvakasha kufanele kuqedwe futhi kubhekwe njengobugebengu.
Kuyintukuthelo yangempela ukuthi isenzo esinesihluku esinje siyaqhubeka nanamuhla.
Zikuphi izimpophoma ze-Iguazu ezibonakala kangcono: eBrazil noma e-Argentina?
Izindawo ezi-10 ezinhle kakhulu ezingaphansi komhlaba emhlabeni